Iindaba Ezilungileyo Zoluntu Lonke, Iindaba Ezilungileyo EzingoYesu
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGrike IsiGuarani IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKazakh IsiKikuyu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLithuania IsiLuo IsiMalagasy IsiMaltese IsiNgesi IsiNorway IsiNzema IsiPhuthukezi IsiPolish IsiQuechua (saseBolivia) IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiThai IsiTigrinya IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo
INQAKU ELINGUMXHOLO | ITHETHA NGANTONI IBHAYIBHILE?
Iindaba Ezilungileyo Zoluntu Lonke
Ukuvuka kukaYesu kwabangela ukuba abafundi bakhe babe nokholo olomeleleyo nenzondelelo. Umpostile uPawulos watyhutyha kulo lonke elaseAsia Minor neMeditera, emisela amabandla yaye esomeleza amaKristu ukuze aqine kwingcinezelo yokuziphatha nakwinkcaso enogonyamelo. Nakubeni kwakukho ezo ngxaki, abantu abaninzi baba ngamaKristu.
Kamva noPawulos wavalelwa ejele. Elapho, wabhala iileta ezazikhuthaza yaye ziluleka amabandla amaKristu. Wawalumkisa ngengozi awayejongene nayo—uwexuko. Esalathiswa ngumoya oyingcwele kaThixo, waprofeta wathi phakathi kwawo kwakuza kubakho “iingcuka ezicinezelayo” ezaziza kuthetha “izinto ezijijekileyo” zize ‘zibatsale abafundi emva kwazo.’—IZenzo 20:29, 30.
Ngasekupheleni kwexesha lokuphila kwabapostile, lwaqalisa uwexuko. Malunga nelo xesha, uYesu ovusiweyo wanika umpostile uYohane iSityhilelo, esasifuzisela into eza kwenzeka kwikamva. Njengoko wabhalayo uYohane, akukho bachasi okanye abafundisi bobuxoki ababeza kuyithintela injongo kaThixo yantlandlolo ngomhlaba noluntu. “Zonke iintlanga nezizwe neelwimi nabantu” ziya kuva iindaba ezilungileyo zoBukumkani bukaThixo. (ISityhilelo 14:6) IParadesi iya kubuyiselwa emhlabeni, yaye nabani na ofuna ukwenza ukuthanda kukaThixo unokuphila kuyo!
Ngaba ezo ‘ziindaba ezilungileyo’ kuwe? Ukuba zilungile, funda okungakumbi ngoko uThixo akuthethayo ngoluntu eBhayibhileni nendlela onokungenelwa ngayo kuko namhlanje nakwixa elizayo.
Unokuzifundela iBhayibhile kwi-intanethi kwi-www.jw.org/xh. Kwakule Webhsayithi, unako ukufunda incwadana enemifanekiso ethi IBhayibhile Sithini Isigidimi Sayo? nethi Iindaba Ezilungileyo Ezivela KuThixo! nencwadi ethi Yintoni Ngokwenene Efundiswa YiBhayibhile? kunye nezinye iincwadi neencwadana ezithetha ngesizathu sokuba siyithembe iBhayibhile nendlela esinokulisebenzisa ngayo icebiso layo kwiintsapho zethu nakubomi bethu bemihla ngemihla. Okanye usenokuncokola neNgqina likaYehova ukuze ufumane inkcazelo engakumbi.
—Lithatyathwe kwiZenzo, amaEfese, kwabaseFilipi, amaKolose, kuFilemon, kweyoku-1 kaYohane kunyeneSityhilelo.